Wiilal Somaali Mareykan ah oo lagu helay dambiyo, kadibna la xakumay – Radio Muqdisho
Wiilal Somaali Mareykan ah oo lagu helay dambiyo, kadibna la xakumay
Xeer beegtida Minneapolis ayaa waxa ay dembi ku heleen seddax wiil oo ay ku eedeeyeen inay taageerayeen dagaalyahano ajaaniib ah iyo dembi sababi lahaa dil.
Kiiskan wiilasha Somaalida ah waakii ugu ballaarnaa ee maxkamad gaaro oo ku saabsan kooxda Daacish dhallinyaro lala xiriirinayo.
Seddaxda eedeysanayaal oo kala ah — Cabdiraxman Daud, 22; Moxamed Farax, 22; iyo Guled Cumar, 21 — hadda waxa ay wajahayaan xukunno xabsi daa’in ah.
Go’aanka oo looga dhawaaqay maxkamad federal ah, waxaa la arkaayay ehellada oo oynaya, qaar kamid ahna waxa ay qolka maxkamadda ka bexeen ayagoo illin ay ka qubaneyso.
Maxamed Faarax waxaa lagu helay inuu galay dambiyada lagu soo oogay oo ka mid ah inuu doonayay inuu ku biiro Daacish iyo inuu dibadda Mareykanka uu dad ku dilo, iyo inuu fariin been ah siiyay ciidamada federaalka.
Guuleed Cali Cumar ayaa lagu helay dhammaan eedaha lagu oogay Maxamed, laakiin waxa uu kaga duwanaa inuusan ka faa’ideysan deeq waxbarasho oo la siiyay.
Cabdiraxmaan Daaud dhankiisa waxaa lagu helay dembiyada lagu oogay, laakiin waxaa lagu waayay inuu been abuur sameeyay.
Ayaan Moxamed Faar, waa hooyada dhashay mid kamida wiilasha waxay BBC-da u sheegtay inaysan ku qanacsaneyn go’aanka ayna racfaan qaadan doonaan.
Isha Warka BBC Somalia